ओहो कस्तो संयोग ! दुरुस्तै देखिने जुम्ल्याहा दाजुभाइसँग कहिलेकाहीँ श्रीमतीहरु पनि झुकिन्छन, कसरी भयो एउटै घरमा बिहे ? – List Khabar
Home / मनोरंजन / ओहो कस्तो संयोग ! दुरुस्तै देखिने जुम्ल्याहा दाजुभाइसँग कहिलेकाहीँ श्रीमतीहरु पनि झुकिन्छन, कसरी भयो एउटै घरमा बिहे ?
ओहो कस्तो संयोग ! दुरुस्तै देखिने जुम्ल्याहा दाजुभाइसँग कहिलेकाहीँ श्रीमतीहरु पनि झुकिन्छन, कसरी भयो एउटै घरमा बिहे ?
admin July 21, 2021 मनोरंजन Leaveacomment 61 Views
भनिन्छ नि बिबाह देखेको होइन लेखेको हुन्छ। एउटा संयोग पनि कस्तो जुम्ल्याहा दाजुभाइले जुम्ल्याहा दिदीबहिनी बिहे गर्नुपर्ने,अरुले हेर्दा पनि हेरिरहुँ लाग्ने,भाइ भाइ बिकल्पको चाहिँ अलिक बोलक्कड स्वभाव छ भने दाजु संकल्प भने केही कम र नियन्त्रीत हिसाबले बोल्ने गर्दछन् भने उता भाइलाई बोल्नमा नसकिने, हँसिलो तथा मिजासिलो स्वभावका छन्। यता त्यीनै भाइले बिहे गरेकी दिदी भने भाइ जस्तै बोलक्कड र मिजासिलो छिन्।अनि दाइले बिहे गरेकी बहिनी भने कम बोल्ने गर्दछिन्।
Previous आहा ! नेपालमा बिदेशि बुहारि ,यसरी यति प्रष्ट नेपाली बोल्छिन् उतिकै मीठो गित गाउछिन् (हेर्नुस् भिडियो )
Next नेतालाई हाेइन गरिब जनतालाई निःशुल्क उपचार गरौँ : कांग्रेस नेता गुरुङ